Shiinaha Truck Side Mirror PK9822 Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Buundada Galbeed
Tayada sare ee PK9822 waa muraayad gaari xamuul ah oo loogu talagalay taxanaha cusub ee Hino & Volvo F110.Waxaan kadhignaa dhamaan badeecadaha kuwa fiican oo waara macaamiisheena. Waxaan leenahay shahaadooyinka CE iyo ISO9001: 2008 si loo hubiyo tayada wax soo saarkyaga Mabda 'ahaan, macaamiil badan ayaa noqda macaamiishayada daacadda ah qarniyo. Daacadnimo iyo Daacadnimo waa mabda'a iyo qiimaha aasaasiga ah ee ganacsigeenna. Waxaan ku qancineynaa macaamiisheena alaab tayo leh, adeegyo qaas ah, nashqadeyn xirfadeed iyo istiraatiijiyad suuq geyn.Waxa naga go'an inaan siino macaamiisha wax soo saarka ugu tayada wanaagsan, iyo sida ku xusan baahida macaamiisha gawaarida xamuulka si aan u siino muraayada muraayadda gawaarida ugu macquulsan. Waxaan leenahay dhamaan muraayadaha aad ubaahantahay.Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto qoyskeena. Shirkadaheena dhamaan shaqaalaheena waxay gashadaan "daacadnimo, xamaasad, waxqabad, xirfad iyo hufnaan" falsafad ganacsi si ay u muujiyaan alaabada ugu tayada sareysa. Shirkaduhu inay fahmaan oo ay buuxiyaan shuruudaha macaamiisha ee aasaaska, iyo inay si joogto ah u xoojiyaan wacyiga shaqaalaha macaamiisha iyo ka warqabka tayada wax soo saarka, waxayna ku dadaalayaan inay ku siiyaan adeegyada ugu tayada badan. Warqadan diirran ee soo dhoweynta ah ee ganacsatada gudaha iyo ajaanibta ah waxay ugu yeereysaa amar wada hadal, waxaad rajeyneysaa inaad kulashaqeyso wada shaqeyn farxad leh
CODSIGA Taxanaha Hino & Volvo F110
Tixraac OEM PK9822
Hore: Muraayadda Truck Side PK9810
Xiga: Muraayadda Truck Side PK9823